» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ६ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ६ (भिडियो)
२५ भाद्र २०७६, बुधबार २१:५७
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २५ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस अघिको भिडियो सामाग्रीको पाँचौँ भागसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये २५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो छैटौँ भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ यो भिडियो सामग्री–
अनुशा आचार्य, पाल्पा, हाल ललितपुर–सानै उमेरदेखि गीत गाउन थालेकी अनुशाले कक्षा ६–७ मा गीत गाउँदा देखि नै प्रशंसा पाउन थालेकी थिईन् । सन् २००० मार्च १ मा पाल्पामा जन्मिएकी अनुशाले क्लासिकल, ज्याज लगायत विभिन्न विधाका गीतहरु गाउने गरेकी छिन् । सेन्ट जेभियर्सबाट एस.एल.सी तथा प्लस टु विज्ञानतर्फ उतिर्ण गरेकी अनुशा हाल पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिंङमा स्नातक तहको दोश्रो बर्षमा अध्ययन गर्दै छिन् । सँगीत क्षेत्रमा करिब ८ वर्ष बिताएकी अनुशाले क्लासिकल संगीतको साधना र ज्ञान सुरशाला म्युजिक एकेडेमीका गुरु अमृत क्षेत्रीसँग लिएकी हुन् भने वेस्टर्न ज्याजको प्रशिक्षण काठमाडौं ज्याज कन्जरभेटरीका स्पेनिश गुरु मारिया फजारडोसँग लिएकी थिईन् । हालसम्म उनले दुईवटा ओरिजिनल गीत र थुप्रै कभर गीतहरु गाईसकेकी छिन । उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘टाढा टाढा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर कोच राजु लामा फर्किएका थिए ।
करण दोङ,जोरपाटी, काठमाडौँ –भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा सहभागिता जनाएर छनौटमा नपरेका करणले यो पटक भने स्टेजलाई निकै तताए । २१ वर्षीय करणको गीत सुनेर चारै जना कोच मात्र फर्केनन् भ्वाईस अफ नेपालको स्टुडियोको माहोल नै तात्तियो । कोच राजु र आश्था स्टेजमा उनीसँगै उक्लिएर नाचे । कोच राजुको युनिक जम्पलाई पनि यही पर्फोमेन्सले भाईरल बनाएको थियो । उनले सविन राईको ‘कोमल त्यो तिम्रो बदन’मा बोलको गीत गाएका थिए । उनी कोच राजुको टिममा छन् ।
प्रवेश खतिवडा, नुवाकोट, हाल काठमाडौँ –सानैदेखि संगीतमा रुचि भएका प्रवेश संगीतको कुरा गर्दा आफ्नो विद्यालयका गुरुलाई सम्झन्छन् । गुरुकै प्रेरणा पाएर उनी संगीतमा अघि बढेका हुन् । भ्वाईस अफ नेपालमा सहभागी हुनुलाई ठूलो सौभाग्य ठानेका प्रवेश २० वर्षका छन् । ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘हे बरै बोल’को गीत गाएका प्रवेशको आवाज सुनेर चारै जना कोचहरु फर्किएका थिए । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
सविना राई, शोलुखुम्बु, हाल काठमाडौँ –बुवाबाट प्रभावित भएर संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी सविनाले व्यवसायसँगै संगितलाई निरन्तरता दिँदै छिन् । २६ वर्षीया सविनाले कोच आश्थाकै आवाजमा रहेको ‘चौबन्दीमा पटुकी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाजमा कोच आश्था फर्किएकी थिईन् ।
सदिक्षा पोखरेल, काठमाडौँ –डेन्टिस्ट पढिरहेकी सदिक्षा काठमाडौँमा बस्छिन् । २३ वर्षीया सदिक्षाले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘खुला आकाश’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर कोच राजु र प्रमोद फर्किएका थिए । उनी कोच प्रमोदको टिममा छिन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलसम्म पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको सातौँ भागका साथै भ्वाईस अफ नेपाल सम्बन्धी अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।
ब्याटल राउण्डमा पुगेका प्रतियोगीहरु भाग5(भिडियो)